English, Romans, Lesson 001 -- Introduction | Waters of Life
Home -- English -- Romans - 001 (Introduction)
Iwebata na akwukwo ozi nke ndi Rome
Otu n’ime onyinye kachasi elu nke Kraist Onye-nwe, onye siri na ndị nwụrụ anwụ bilitere, na nzuko ya n’oge niile, bụ akwụkwọ ozi dị mkpa o ji mmụọ nsọ kpalie Pọl, onye nnọchi anya ya, idegara ndị Rom bi na isi obodo Rom akwụkwọ ozi.
Ihe kpatara na ebumnuche nke Akwukwo Nso
N’oge ahụ, onyeozi nke ndị Jentaịl kwusachara ozi ọma n’Eshia Maịnọ na n’obodo ndị Gris n’oge njem ozi ala ọzọ ya atọ. N'oge njem ozi ala ọzọ ndị a, o guzobere ụka dị iche iche n'obodo ndị isi, guzobere ndị kwere ekwe na ọrụ ịhụnanya, ma họpụta ndị okenye, ndị ụkọchukwu na ndị bishọp maka ndị ụka. Ọ chọputara na arụchaala ọrụ ọwụwa anyanwụ nke Mediterranean. Yabụ, ọ gara ọdịda ọdịda anyanwụ iji guzobe ala-eze nke Kraist na France na Spen (Ndị Rom 15: 22-24).
N’ikwekọ na atụmatụ ndị a, o degara ndị otu ụka dị na Rom akwụkwọ ozi ya a ma ama iji mee ka obi sikwuo ha ike, mee ka ha mata na ọ bụ onyeozi nke Kraịst nye ndị mba niile site na iji nlezianya na-amụ Ozi ọma. nyefere ya. Ọ nwara imetụ obi ha aka ka ha wee sonye na njem ozi ala ọzọ ya nke ọdịda anyanwụ, dịka ụka nke Antiọk dị na Syria kwadoro ekpere ha, ikwusa ozi ọma, na ahụhụ ya site n’ezi ntụkwasị obi ha. Ya mere, akwukwọ-ozi a degaara ndị Rom nwere ọmụmụ ihe mbido, bu n’obi ime ka ụka kwenye n’onwe ya na ezigbo okwukwe, ma kwadebe ya maka ikwusa ụwa niile site na ntinye ọnụ n’ọrụ ahụ.
Ma Pọl, Pita, ma ọ bụ onyeozi ọ bụla ọzọ, ma ọ bụ okenye ọhụụ a ma ama guzobere ụlọ ụka Rom. Dika odi, obu site na ufodu ndi njem uka ndi Rom ndi gosiputara n’ala oma na Pentikọst, ebe Kraist wusiri Mo Nso na ekpere ncheghari. Ire ha juputara n'ihe nke dike nke dike, ma site na nka gasiri ha laghachiri n’obodo ukwu, ma gbaa nti na nzuko ha banyere Onye Puru Ime Ihe Niile n’obe kpogidere n’obe. Ha na ndi enyi ha Ju na ndi mba ozo kwurita okwu banyere nzoputa ya, ma guzobe ulo n’ebe obibi ha maka imuta amuma agba ochie banyere Kraist.
N'oge njem ya na Esia na Gris, Onye ozi Pọl zutere ndị kwere ekwe na Rom ugboro ugboro, ọkachasị mgbe a chụpụrụ ndị Juu na Rom n'oge ọchịchị Klọdiọs Siza, tupu 54 A.D. (Ọrụ 18: 2). Paul choro ka ya onwe ya na ndi Rom mara onwe ya, na inye onyinye nke Mmuo Nso nke na aru oru n’ime ya. Ocheghi na ichoro ichota isi obodo nke uwa, n'ihi na o choputara ulo uka ndi nwere onwe ha. Ọ chọrọ, kama, ịga n’iru ya na mkpakọrịta nke ụmụnna ndị a n’ime Onye-nwe, ịgbasa ozi ọma nke nzọpụta na mpaghara ndị mechiri emechi.
Onye dere akwụkwọ ozi ahụ? Mgbe ole? Ebeekwa?
Onyeozi Pol ekewet leta emi ke 58 A.D. ke ini okodude ke ufọk Gaius ke Corinth, emi enye akabatde ifiọk n̄kpọntịbe eke spirit ye ​​ukpepn̄kpọ mme apostle. Ọ dịghị onye ọzọ nwere ike ide dịka Pọl dere n'akwụkwọ ozi a, maka Kraịst dị ndụ, Kraịst dị ebube ji aka ya guzoro n'ụzọ ya, mgbe ya, na ịnụ ọkụ n'obi ya maka Iwu ahụ, chọrọ ime mkpagbu kpụ ọkụ n'ọnụ nke Ndị Kraịst nọ na Damaskọs. Ma mgbe ìhè nke Chineke na-enwu n’ime ya, ọ matara eziokwu dị ukwuu na Jizọs onye Nazaret na-eleda anya, na ọ bụ Onye nwe ebube, onye arụghị arụ n’ili n’ili mgbe akpọgidere ya n'obe. Kama Jizọs meriri ọnwụ, ma bilitekwa n’ọnwụ, gosipụta na ọ bụ Onye Pụrụ Ime Ihe Niile, onye nwere ike n’ebe ihe niile dị. Mgbe ahụ Pọl ghọtara na Ọkpara nke Chineke akatọghị ma ọ bụ bibie onye na-akpagbu ya, kama na-emere ya ebere ma kpọọ ya maka ọrụ ozi ala ọzọ ọ bụghị n'ihi uru ọ bara, kama dịka amara si dị. N'ihi ya, Pọl, onye na-anụ ọkụ n'obi, nwere nkụda mmụọ ma nwee obi erughị ala. O kwenyere n’amara nke Chineke na n’ebum n’uche nke ezi omume. Ọ dabereghị na ụmụ mmadụ dịka iwu siri dị. Kama ọ malitere gazuo ụwa niile, dịka ohu nye ịhụnanya nke Kraịst, na-akpọ ndị nduhie niile na ndị arụrụ aka ka ha na Chineke dị ná mma.
Kedu ụzọ dị iche iche e ji ede akwụkwọ ozi a?
Ihe Pọl bu n'uche bụ ime ka onye ọ bụla na ka nke Rom gbanwee mgbanwe okpukpe a. Ma, maka ebumnuche a, o deghị akwụkwọ n'asụsụ mara mma, nke dị ọcha, ma ọ bụ ogologo mkparịta ụka. Kama nke ahụ, o dere akwụkwọ ozi zuru oke ma doo anya, ma zaa ajụjụ ndị ọ tụrụ anya na ndị Juu na ndị Rom ga-ajụ. Paul dere akwụkwọ ozi ya na Tertius, nwanne ya nwoke n'ime Onyenwe anyị, na-eche na mmụọ ya ihe mgbakwunye nke o degara. N'otu oge, ọ gwara ndị kwere ekwe ọhụrụ okwu, na-elebara enweghị isi ha anya n'ịdị ọcha nke Chineke. Mb hee ahu ọ dọtara ndi nile etiwara na okwukwe di ndu, nke ahuru na izi ezi na Kraist, onye bu olile anya diri mmadu. N’oge ozo, ọ gbara ndi ọka iwu dị mpako ala, ma mebie ezi omume nke onwe ha, na-egosi nrụrụ aka ha na ọdịda ya zuru oke, na etu esi edo ya nsọ na okwukwe dị ala maka ihunanya nke Chukwu, na nrube isi nye Mmụọ Nsọ. Dabere na, n'akwụkwọ ozi ya, onyeozi ahụ jikọtara ozi ọma na izi ihe nkịtị, nke dị jụụ. Ọ gwaghị ndị otu okwu, kama ụdị mmadụ niile na-anụ ya; ndị Jentaịl na ndị Juu, nwata na okenye, ndị gụrụ akwụkwọ na ndị na-agụghị akwụkwọ, nkekọ na ndị nweere onwe ha, ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwanyị. Akwụkwọ ozi nke ndị Rom bụ, ruo taa, bụ otu n'ime nkuzi kachasị n'ime Kraịst, dịka Dr. Martin Luther gbara ama n'okwu ya: “Akwụkwọ a bụ akụkụ kachasị nke agba ọhụụ na ozigbo ozi oma, nke kwesịrị ka ebu ya n'isi. Onye Kraist obula, ma were ya ubochi niile dika mkpuru obi nke ime mmuo, nihi na anyi n’ahu n’ime akwukwo ozi a ihe onye kwere ekwe aghaghi ima: Iwu na ozioma, nmehie na ikpe, amara na okwukwe, ezi omume na ezi okwu, Kraist na Chineke, di nma. omume na ihunanya, olile anya na obe. Anyi makwara otu esi eme onye ọ bụla ihe n’agbanyeghi etu onye nsọ si bụrụ onye mmehie ma ọ bụ onye mmehie, onye siri ike ma ọ bụ nke na-adịghị ike, obụpita aka ọ nwere; marakwa ka anyị ga-esi na-emeso onwe anyị. N'ihi ya, m na-agwa Ndị Kraịst niile ka ha zụọ onwe ha na ya.”
Nwanne m nwoke, oburu na ichoro ihe omumu gi na iguzosi ike banyere okwukwe gi, juo leta nke ndi Rom ma were nlezianya muo ya. Ọ dịka mahadum nke Chukwu, nke juputara na ihe ọmụma, ike, na mmụọ. Mgbe ahụ Kraist ga-anapụta gị nganga na ntụkwasị obi nke onwe gị, ma mee ka ị guzosie ike n’ezi omume zuru oke ka ị bụrụ ohu dị ike na omume nke ihunanya Chineke, na-eto n’okwukwe kwa ụbọchị.
Nchoputa nke akwukwo ozi nye ndi Rom
Ndi Rom 1: 1-17 - Ndi amara aha onye dere ekpughere ulo uka di na Rom. Nkwuputa nke ndi Apostolic. Ngosiputa ezi omume nke Chineke dika ihe nlere anya nke akwukwọ ya.
NKEBI NKE 1 - EGO NA-AKPU NIILE CHINEKE N’AKA ANYI
Ndị Rom 1:18 - 3:23 - Anyị niile bụ ndị mmehie, Chineke ga-amakwa anyị ikpe dịka Iwu ahụ siri dị, nke na-emebi echiche nke nganga anyị.
Ndi Rom 3:24 - 4:25 - Chineke gesi n’onye ezi omume me ka madu nile guzosie ike site na nbuputa nke Kraist, ma oburu na ha kwere na ya.
Ndị Rom 5: 1 - 8:39 - Mụọ nke Onyenwe anyị bi n’ime ndị kwere ekwe ma mee ka ha nwee olile-anya na mmeri n’ebe mmehie dị, ma ha na-eje ije n’ike nke Mụọ, n ’Iwu.
NKEBI NKE 2 - CHUKWU OKWU CHUKWU N’ANYA
Ndi Rom 9: 1 - 11:36 - Chineke gara n’ihu ịbụ onye ezi omume n’agbanyeghi ọgbụgba ndụ ochie nke ndị mmadụ jụrụ amara ya.
NKEBI NKE 3 - IKPUTA CHINEKE N'IHI NA ANYA
Ndị Rom 12: 1 - 16:27 - Ezi okwukwe gbanwere akparamagwa na ndụ anyị ka ọrụ nke ihunanya na ido onwe anyị nye anyị.
Nke a abụghị akwụkwọ ozi dị mfe ịmụ. Ọ chọrọ nke ọma inyocha, ekpere, na ntụgharị uche, ka ị wee nweta ngọzi ya, chegharia, me ka uche gị dị ọhụrụ, wee hụ ọhụụ nke ndụ n’ime Kraịst. Dika akwukwo ozi a ewetaghi ndi Rom ndi uda, ma o doziri ha maka oru ikwusa ozi oma na gburugburu ha na obodo ndi ozo, ya mere Kraist n’edoro gi ka o juju n’amara ya ka o we ziga gi na umunne gi ndi ezi omume. ndi mmadu nke ihunanya na olile anya. Ge ntị, kpee ekpere ma gaa.
Gini udi uwe dị a didaa ka Pọl jiri mee n'akwụkwọ ozi ya?
Page last modified on January 25, 2021, at 03:10 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)